Twitter wuxuu ku shaqeeyaa aalado looga hortago dhibaataynta iyadoo la adeegsanayo ereyada muhiimka ah | Wararka IPhone
Alejandro Cabrera | | Barnaamijyada IPhone, Noticias
Ka dib taxane taxane ah oo sheekooyin caan ah oo dhowaan ku saabsanaa «Tweets naxariis darada ah»Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha, ayaa la sheegay in Twitter wuxuu isu diyaarinayaa inuu soo bandhigo muuqaal dhexdhexaad ah oo cusub taas ayaa u oggolaan doonta isticmaaleyaasha shaandhee waxyaabaha ay ku arkaan adoo adeegsanaya ereyada muhiimka ah. Fariimo kasta oo isdaba joog ah oo leh ereyo waxyeelo leh oo karti u leh ayaa laga xayirayaa jadwalka isticmaalaha oo aan iyaga u muuqan karin.
Qalabka ka hortagga xoogsheegashada ayaa la sheegay inuu muddo hal sano ah ka shaqeynayay shirkadda, welina uusan diyaar u ahayn soo-saar ballaaran. Warku wuxuu ka yimid koox dad ah oo ku dhow mashruuca, waxayna u badan tahay inuu si dhaqso leh u soo jiito sababa la xiriira dhacdooyin badan oo nasiib darro ah oo ku xeeran shabakadda bulshada, halkaas oo laba wariye iyo dad caan ah lagu weeraray adeegga.
Twitter wuxuu u baahan yahay inuu soo jiito oo uu sii haysto adeegsadayaasha si tirada isticmaaleyaasheeda aysan hoos ugu dhicin. Shirkaddu waxay qaadatay bilihii ugu dambeeyay la-tashiga golaha dibedda ee kooxaha ladagaalanka xoogsheegashada oo ku saabsan istiraatiijiyaddiisa wax ka qabashada arrinta, taas oo noqotay mudnaanta koowaad ee madaxa shirkadda Twitter Jack Dorsey.
Twitter-ka ayaa qaaday tallaabooyin yar yar sannadkan, sida in dadka loo fududeeyo ka warbixi cayda fariimaha xun xun. Si kastaba ha noqotee, aaladda ereyga muhiimka ah, haddii la adeegsado, waxay noqon doontaa kan ugu horreeya ee siinaya dadka isticmaala kantarool badan waxa ay arkaan halkii ay ka horjoogsan lahaayeen shakhsiyaadka isticmaala ka dib markii la weeraro.
Twitter iyo agaasimihiisa guud, Jack Dorsey, ayaa isku dayay inay jidka u maraan abuurista jawi dhib yar oo ka yimaada shabakada bulshadaLaakiin illaa iyo hadda ma aysan abuurin muuqaal gacan ka geysan kara kahortagga xoogsheegashada ee baaxadda ballaaran. Awoodda xallinta ereyga muhiimka ah waxay u egtahay mid loo isticmaalo Instagram, taas oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha inay shaandheeyaan qaybta faallooyinka ee sawirradooda maxaa yeelay waxaa jira ereyo ama weedho kala duwan oo meel ka dhac ku ah dadka kala duwan.
Warka ayaa imanaya kadib Twitter ayaa soo warisay kororka dakhliga illaa 2013, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan sumcadda sii kordheysa ee shirkadaha tartamaya ee Snapchat iyo Instagram. Si wax looga beddelo, Twitter wuxuu qorsheynayaa inuu diiradda saaro shan aag oo muhiim ah oo ka dhex jira shabakaddiisa, mid ka mid ahna uu diiradda saari doono sidii looga badbaadin lahaa dadka isticmaala internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Twitter wuxuu ku shaqeeyaa qalab looga hortago xoogsheegashada iyadoo la adeegsanayo xannibaadda ereyga muhiimka ah